Archive du 20190124
Marc Ravalomanana Hiatrika ny fifidianana isika
Misaotra sy midera an’Andriamanitra lalandava isika satria izy no mandahatra ny zavatra rehetra. Amin’ny anaran’ny tenako manokana sy ny fianakaviako, amin’ny anaran’ny TIM K25
Andry Rajoelina Ho filoha saribakoly fotsiny ?
Tsy hiadian-kevitra intsony ny maha filoham-pirenena Malagasy an’i Andry Rajoelina.
Fifidianana depiote Mila fiomanana dieny izao
Vita iny ny fifidianana filohan`ny Repoblika. Efa voatendry io koa ny praiminisitra vaovao ka tsy tokony hipetrapetraka intsony ny eo anivon`ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI).
Antoko Otrikafo Hanao toy ny mpitondra teo aloha ity fitondrana vaovao ity
Mitohy ny fampisavorovoroana ny saim-bahoaka ataon’ireo vahiny fahavalom-pirenena, ary manaraka ambokony izany ireo teratany mpitsivalam-pandry amin’ny fiandrianam-pirenena raha mbola hanao ny fanaon`ny mpitondra teo aloha rehetra ny fitondrana vaovao misy.
Sehoseho ivelan’ny fanjakana Azo raisina fa tsy mitombina
Malalaka amin’ny fanatanterahana ny veliranony i Andry Rajoelina amin’izao. Maro ny zavatra nampanantenainy ny olona na am-bava na an-tsoratra.
Raharaha Jaovato sy Rajaonarimampianina Hiakatra fitsarana amin’ny 18 febroary
Nahemotra amin’ny 18 febroary izao indray ny raharaham-pitsarana nitorian’ny depioten’Antalaha Laisoa Jean Pierre na Jaovato ny filoham-pirenena teo aloha Hery Rajaoanrimampianina.
Politikan’ny toetr’andro Tsy ampy ary tsy mazava ny an’i Madagasikara
Ankoatra ny resaka karama dia anisan’ny nahatonga ny hetsiky ny Gilet Jaune tany Frantsa nandritra izay 10 herinandro izay ny fampiharana ny tahan’ny karibaona (application taxe carbone).
Fangatahana “visa” mankany Frantsa Hisy fiovana ny fikarakarana
Firenena be mpisafidy ivahinianana i Frantsa noho izy manankarena amin’ny fahasamihafana, indrindra ho an`ny kaontinanta Afrikanina.
Io ary fa mipoitra tsikelikely tokoa ilay efa nahiana. Na ara-bakiteny izao na ara-tandindona sy sarinteny dia ilay fanontaniana efa napetraka teto amin’ny gazety volana maro lasa hoe “ndrao velirano hahavery rano no hitranga ?”
Sekoly ambony UPRIM Amin’ny volana martsa ny fidirana manaraka vaovao
Mba ho fitsinjovana ireo mpianatra mbola naka aina kely taorian’ny fiatrehana ny fanadinana bakalôrea taona 2018 dia hanatanteraka fidirana andiany faharoa indray ny sekoly ambony UPRIM amin’ny volana martsa ho avy izao. Ny L1, L2, L3 ary ny M1 sy ny M2 no
Mpianatra sy mpampianatry ny Lisea Nanisana Tsy manaiky ny fametrahana ilay « proviseur » vaovao
Vaky ihany koa ny ady ao amin’ny lisea Nanisana. Tsy manaiky ny hametrahana ilay proviseur vaovao izay mpampianatra tao amin’ity lisea ity teo aloha ihany ireo mpampianatra sy mpianatra ao an-toerana.
MITOHY NY FANENJEHANA NY K25
Raha noheverina fa efa mba nivalona ny fanenjehana ara-politika ireo mpomba an’i Dada taorian’ireny fanekeny ny fahareseny ireny mba tsy hanakorontanana ny firenena, tsy izay velively no mitranga.
Misy ny hetsika ara-toekarena lehibe na ny forum économique international tanterahana any
Tsy mbola misy ny vola vaovao navoaka taorian’ilay roa alina ariary tokana nivoaka tamin’ny 2017, hoy ny avy eo anivon’ny banky foiben’i Madagasikara.
Resaka foko sy firazanana Mbola ahiana hampisara-bazana
Novoizin’ireo mpanasa atidoha vahoaka hitarihana fankahalana kandida iray nandritry ny fifidianana ho filoham-pirenena farany teo ny resaka foko sy firazanana.
Faritra avon’Antananarivo Tsy tokony hipetrahana intsony ny 85%
Mbola mitana ny sain’ny maro ny tohin’ilay fihotsahan’ny tany niteraka ratra sy faty olona nahatsiravina nitranga tetsy amin’ny fokontany Tsimialonjafy.
Tany sy vato nihotsaka teny Tsimialonjafy Razana roa sisa no karohina
Razana roa hatramin’ny omaly no hita teny Tsimialonjafy taorian’ny fikarohana nataon’ireo vondron-kery maro samihafa nahitana ny tafika, ny skoto, ny tily sy ny Antily, ny FID.
Mpivady miady Folo isan’andro ny tranga misy eny Andraisoro
Mirongatra ny adin’ny mpivady ao amin’ny fokontany Andraisoro. Raha ny fanazavan-dRasolofomanana Rolland, lehiben’ny vaomieran’ny fandriampahalemana ao an-toerana dia mahatratra folo isan’andro ny fitarainana voarain’izy ireo.
Ora-mikija tao Mahajanga 250 isa mahery sahady no traboina
Taorian’ny orana nikija nandritra ny telo andro tao Mahajanga dia nisy ny fiakaran’ny ranomasina.
Mitoka-monina Ambilobe Miandry an-dRajoelina ny mponina
Ny tanànan’Ambilobe no nosafidian’i Andry Rajoelina nanaovana fidinana ifotony voalohany ny 8 martsa 2018 rehefa niomana hirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena ny tenany.
Tambajotran-tserasera Mahalasa adala ny Malagasy…
Amin`izao vanim-potoana izao dia toa lasa Ambohipihaonana ny tambajotran-tserasera fesiboky (Facebook).